निर्मातामाथि राजनीति गरेर कसरी बच्छ होला सिनेमा क्षेत्र ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsनिर्मातामाथि राजनीति गरेर कसरी बच्छ होला सिनेमा क्षेत्र ?
सुत्र इन्टर टेन्मेन्ट- दशैको ५ दिने बिदा । यो बिदामा सिनेमा सोलो रिलिज भए त निर्मातालाई मालामाल । यसैले सिनेमा रिलिज गर्नका लागि तछाडमछाड । यो भीडमा यसपटक ठूलो राजनीति देखियो ।
जय भोले सिनेमाले छक्का पन्जा ३ को रिलिज डेटलाई नछाड्ने निर्णय लिएपछि यसका निर्माता दिपकराज गिरीले सिनेमा रिलिजको १५ दिन अघिसम्म प्रदर्शन मिति र ट्रेलर सार्वजनिक गर्न नै सकेनन् ।
उनले जय भोले सिनेमामा निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मासँग दैनिक वार्ता गरे । बार्ता सफल भएन । दिपकको ध्यान सिनेमा कस्तो बनाउने भन्दा पनि अशोक शर्मालाई कसरी मनाउने भन्नेमा गयो । अन्तत, एकसाताको अन्तरमा सिनेमा रिलिज भयो । बाजी दिपकले मारे । तर, यो बाजी मार्नका लागि उनले खेलेको खेल कुनै राजनीतिक खेल भन्दा रोचक भएन ।
नेपाली सिनेमाको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि, कुनै राजनीतिज्ञले खेल्ने खेल भन्दा यहाँको खेल रोचक र दिकदार लाग्दो छ । निर्माताले ढुक्कसँग सिनेमा बनाएर ढुक्कले रिलिज गर्न पाएको खण्डमा बल्ल सिनेमा पनि राम्रो चल्न सक्छ । यहाँ त सिनेमा बनाउँदा नै सुरु हुने राजनीतिले त्यता मिलाउने कि सिनेमा मेकिङमा ध्यान दिने तनाव हुन्छ ।
अब, फागूण १७ कै डेट हेरौ । यो मितिमा अनमोल केसीको क्याप्टेन आउने पक्का थियो । विपिन कार्की र बर्षा राउतको जात्रै जात्रा आउने पक्का भयो । तर, पछि विपिन घाइते भएपछि जात्रै जात्रा सर्यो ।
क्याप्टेनका निर्माता सोलो रिलिज गर्ने धुनमा देखिए । तर, एकाएक यहाँ पनि राजनीति घुस्यो । दि ब्रेकअपका निर्देशक हेमराज वीसीले वितरकसँग सल्लाहा नै नगरि फागूण १७ मा मिति तोकिदिए । अनमोल केसीसँगको इगोका कारण दि ब्रेकअप यो मितिमा आएको थियो ।
अहिले निर्माता भूवन केसी घेरावन्दी गर्न थालिएको सोचाइमा पुगेका छन् । अब, उनी सिनेमा बनाउन भन्दा पनि रिलिजको राजनीतिमा लडाई गर्नका लागि तयार छन् ।
चैत्र २९ गतेको लडाई झनै फोहोरी छ । यो मितिमा ए मेरो हजुर ३ आउने पक्का थियो । पछि, निर्माता केशव भट्टराइले यात्रा सिनेमा ल्याइदिए । निर्माता सुनिल कुमार थापा राम्रो लोकेशनमा सिनेमा खिचिरहेका छन् ।
उनी, सिनेमा राम्रो बनाउनेतर्फ सोचुन् कि फिल्मको राजनीतिमा लागुन् ? सिनेमा नालापानी पनि यो मितिमा आउँदैछ । नालापानीको राजनीति राजनीतिक पार्टीसँगै नै जोडिएको छ । यसैले पनि यो भिडन्त अझै विशेष हुनेछ ।
नेपाली सिनेमामा ठूला ब्यानर र चलेका कलाकारको भिडन्त खुबै हुन्छ । यसले सिनेमामा राजनीति कति हुन्छ भन्ने देखाउँछ । निर्मातालाई सिनेमा राम्रो बनाउन दिएर राजनीति कम गरे के हुन्छ होला ?